Ny hopitaly ankapobeny an'ny tafiky ny fanafahana vahoaka - siansa sy teknolojia teknolojia Shenzhen Doneax CO., LTD
Ny hopitaly ankapobeny an'ny tafika fanafahana vahoaka
Niorina tamin'ny 1953 ny hopitaliben'ny tafiky ny fanafahana ny vahoaka (PLAGH), lasa hopitaly lehibe maoderina izy izay manana talenta matihanina maro, fifehezana ara-pitsaboana rehetra, fitaovam-panatanjahan-tena ary fanjakazakana tokana, eo ambanin'ny ny hery fanohanana iraisan'ny Tafika Fanafahana ny vahoaka Sinoa. Ny hopitaly dia tobim-pitsaboana lehibe ho an'ny mpiasa ao amin'ny governemanta foibe. Izy io dia tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana ara-pitsaboana ny kaomisionan'ny tafika, ny foibeny ary ny tarika hafa, ny fitsaboana ny manamboninahitra sy ny miaramila, ny famindrana ny fitsaboana ara-pitsaboana ho an'ny serivisy miaramila isan-karazany, ny diagnostika ary ny fitsaboana ireo aretina tsy azo sitranina. Sekoly fitsaboana ao amin'ny Tafiky ny Fanafahana ny Vahoaka koa ny hopitaly. Ny atiny fampianarany dia ny fanabeazana aorian'ny diplaoma. Io no hany fitaovam-pampianarana tantanan'ny hopitaly ao amin'ny tafika iray manontolo.
Raha ny angom-baovao ao amin'ny tranonkala ofisialin'ny hopitaly tamin'ny desambra 2015, ao amin'ny hopitaly, dia misy sampana teknika klinika sy ara-pitsaboana 165 ankehitriny, sampana fitaizana be antitra 233, sampam-pianarana 8 nasionaly, laboratoara Key nasionaly 1, ambaratonga faritany sy minisitra 20 ary Laboratoara manan-danja amin'ny ambaratonga miaramila, ivon-toeram-pitsaboana sy oniversite fikarohana manokana miisa 33, mamorona tombony matihanina 13 miavaka amin'ny famaritana sy fitsaboana feno. Mandritra izany fotoana izany, io no tobin'ny fampisehoana fitsaboana mafy ho an'ny tafika iray manontolo sy ny toeram-piofanana ao amin'ny Fikambanan'ny mpitsabo mpanampy sinoa. Misy tobim-pitsaboana iraisam-pirenena sy tobim-pitsaboana ara-pahasalamana, manome serivisy fitsaboana avo lenta. Isan-taona dia marary maherin'ny 4.9 tapitrisa mila fitsaboana vonjy maika no ho tonga any amin'ny sampana marary amin'ny hopitaly. Ankoatr'izay dia mandray olona 198000 isan-taona izy io ary efa ho 90.000 ny fandidiana atao.
Ny hopitaly dia manana akademisiana 5 ao amin'ny Akademia Shinoa misahana ny injeniera, manam-pahaizana teknika mihoatra ny 100 ambonin'ny haavo 3, ary olona matihanina sy teknika maherin'ny 1.000 nahazo Fanabeazam-pirenena Ambony. Ny hopitaly dia nahazo mari-pankasitrahana mihoatra ny 1,300 tamin'ny zava-bita ara-tsiansa sy ara-teknolojia mihoatra ny faritany sy ny minisitra, anisan'izany ny loka voalohany ho an'ny fandrosoana ara-tsiansa sy teknolojia nasionaly, loka 20 faharoa, loka famoronana nasionaly 2, ary loka 21 voalohany ho an'ny siantifika miaramila sy fandrosoana ara-teknolojia.
Raha ny angom-baovao ao amin'ny tranokala ofisialin'ny hopitaly tamin'ny Desambra 2015, 165 ny sampana fitsaboana sy haitao ary tobim-pitsaboana 233 ny hopitaly. Misy ivon-toeram-pitsaboana iraisam-pirenena sy tobim-pitsaboana ara-pahasalamana hanomezana serivisy fisorohana avo lenta sy fitsaboana.
Sehatra fikarohana siantifika
Raha ny angom-baovao ao amin'ny tranonkala ofisialin'ny hopitaly tamin'ny Desambra 2015: Ao amin'ny hopitaly, misy laboratoara lehibe 1, laboratoara lehibe 2 an'ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena, laboratoara 9 lehibe any Beijing, laboratoara 12 lehibe ho an'ny fitsaboana miaramila, nasionaly 1 ivon-toeram-pikarohana momba ny fitsaboana klinika, ary ivon-toeram-pikarohana iraisana iraisan'ny iraisana 1, mamorona tombony matihanina 13 manasongadina aretina sy fitsaboana feno.
Raha ny angom-baovao ao amin'ny tranonkala ofisialin'ny hopitaly tamin'ny desambra 2015: 23 no nanohana ny hopitaly siansa sy teknolojia sinoa sinoa, ary iray kosa ny gazety nampidirin'ny SCI.